Pharma အဆင့် (USP / EP / BP) ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China Glycine CAS 56-40-6 | ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
CAS အမှတ် .: 56-40-6
Glycine (Abbreviated Gly) သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၀ မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဆေးဝါး၊ အစာနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
အစားအစာအဖြစ်၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အရသာ၊ ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အာဟာရဖြည့်စွက်ဆေးများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သိုလှောင်ထားသည့်သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေရန်အတွက်ထောပတ်၊ ဒိန်ခဲနှင့်မာဂျင်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဆေးဝါးဆိုင်ရာအလယ်အလတ်ဖြစ်သော Glycine သည် cephalosporin၊ aureomycin ကြားခံ၊ VB6 နှင့် Threonine စသည်တို့နှင့် thiamphenicol ၏အလယ်အလတ်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Glycine ကို Aspirin နှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါကအစာအိမ်ကိုယားယံစေနိုင်သည်။ Glycine ကိုအမိုင်နိုအက်စစ်ဆေးထိုးသည့်အစာတွင်အာဟာရပြန့်ပွားမှုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။
Glycine သည်ပေါင်းသတ်ဆေး Glyphosate ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။
(၁) ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းတွင် CO2 ကိုဖယ်ရှားရန်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
(၂) PH ထိန်းညှိသူအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်
(၃) Herbicide Glyphosate အတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
2. အစားအစာ / အစာအဆင့်
(၁) အရသာ၊ ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အာဟာရဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆားငန်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ချိုသောကြောပိတ်ဆို့မှုများအတွက်အရက်ယမကာ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
(၂) အရသာနှင့်အရသာကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အစာအာဟာရတိုးပွားစေရန်ဆားငံပြာရည်၊ ရှလကာရည်နှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များပြုလုပ်ရာတွင်လည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။
(၃) ငါးချဉ်၊ မြေပဲယိုများနှင့်ခရင်မ်၊ ဒိန်ခဲစသည်တို့အတွက်ကြာရှည်ခံစေရန်အတွက်
(2) myasthenia တိုးတက်သောနှင့် Pseudo hypertrophic ကြွက်သား dystrophy ကုသရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
(3) အာရုံကြော hyperacidity နှင့်အစာအိမ်အနာအစာအိမ် hyperacidity ကုသရန်အက်ဆစ် - အောင်အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အကြောင်းအရာ EP7.0 BP2007 USP39
အသွင်အပြင် အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့် အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့် -
ဖြေရှင်းချက်၏အသွင်အပြင် ရှင်းလင်းသော ရှင်းလင်းသော -
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ ခ) က အက်စ်အထိ အက်စ်အထိ -
ခ အက်စ်အထိ အက်စ်အထိ
ဂ အက်စ်အထိ အက်စ်အထိ
ဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှု (အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်းစမ်းသပ်) - - အက်စ်အထိ
Ninhydrin-positive ပစ္စည်းများ အက်စ်အထိ - အက်စ်အထိ
Assay 98.5-101.0% 98.5-101.0% 98.5-101.5%
ကလိုရိုက် .000.0075% .000.0075% .000.007%
အကြီးစားသတ္တုများ (PB ကဲ့သို့) .000.001% .000.001% .000.002%
ဆာလဖိတ် - - .000.0065%
PH တန်ဖိုး ၅.၉ ～ ၆.၄ ၅.၉ ～ ၆.၄ -
ခြောက်သွေ့ခြင်းအပေါ်ဆုံးရှုံးမှု .50.5% .50.5% .20.2%
စက်နှိုးအပေါ်အကြွင်းအကျန် - - .10.1%
အလွယ်တကူ hydrolysable တ္ထုများ - - အက်စ်အထိ
ရှေ့သို့ Pharma အဆင့် (USP / EP) အတွက် DL-Methionine CAS 59-51-8
နောက်တစ်ခု: Pharma အဆင့် (USP) အတွက် L-Leucine CAS 61-90-5
73-32-5 L-Isoleucine, Phade အဆင့် L-Leucine, L-Threonine ဆေးဝါးအဆင့်, တိရိစ္ဆာန်အာဟာရ, L-Threonine အစားအစာအဆင့်, L-Valine 72-18-4,